I-china i-Portable Tescar Therapy CET RET RF enabakhiqizi be-Vacuum System nabaphakeli | Ubuhle
Ephathekayo iTescar Therapy CET RET RF enohlelo lwe-Vacuum
2021 Umshini Wokwakha Umzimba Ohamba phambili
I-448khz yokwelashwa kweTescar CET RET RF ene-Vacuum
1) Thuthukisa ukujikeleza kwegazi futhi uthuthukise imetabolism kanye nokuzivikela komzimba.
2) Lawula i-endocrine, uthuthukise ukulala, unciphise ukukhathala.
3) Kukhulula futhi kuphulukise izingxenye ezahlukahlukene zomzimba, njenge-spondylosis yomlomo wesibeletho, i-lumbar spondylosis, ihlombe elifriziwe, njll.
4) Ukuphakamisa ubuso, ukuthuthukisa ithoni yesikhumba nokunciphisa ukuguga kobuso.
5) Thuthukisa usayizi womzimba, unciphise amafutha we-visceral ngokweqile, ukuncipha nokwakheka.
6) Buyisela izinzwa ezijwayelekile ezinhlanu ngokuphumula kwemisipha namaseli.
I-7) Isiza ngokutholwa kokuqala kwe-ligament sprains, imisipha yemisipha, ukulimala kwemisipha, nobuhlungu bokuzivocavoca
8) Xazulula izimpawu zomzimba obandayo, umzimba ophansi we-metabolism, izandla nezinyawo ezibandayo, njll
Langaphambilini Q0 slim Umshini Roller + Cavitaton + RF + seso Light
Olandelayo: Imigqa eyi-11 i-HIFU yobuso nomzimba